आज ओली र माधववीच के-के कुरा भए ? « Jana Aastha News Online
आज ओली र माधववीच के-के कुरा भए ?
प्रकाशित मिति : ३० कार्तिक २०७७, आईतवार २०:५१
आज आइतबार बिहानैदेखि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी निवासमा नेकपाका नेताहरूसँगको भेटघाटलाई तीब्रता दिनुभएको छ । भेटघाट र कुराकानी आफ्नो पक्ष र बिरोधी खेमाका सबैसँग सरोबरी भएको छ । आउँदिन भन्दाभन्दै बिहान सबेरै नेकपा उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र दिउँसो वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाललाई महासचिवमार्फत बोलाएर अर्का अध्यक्षमाथि कटाक्ष गर्ने काम भएको हो ।
नेपालसँगको भेटमा खासै नयाँ कुरा व्यक्त भएन । बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीले भेटघाटलाई तीब्रता दिँदै गर्दा यता उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल,लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल,प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापा र पूर्वमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले सामाजिक सञ्जालमा रंगाएका स्टाटसभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले बिरोधी खेमाका नेताहरूसँगको भेटमा व्यक्त गरेका शब्द र भाषा कत्ति पनि फरक नभएको श्रोतको दावी छ ।
नेपालले कुराकानीको शुरुवातमै ‘तपाईं आफ्नो कमजोरी किन हेर्नुहुन्न ? धाक,धम्की नदेखाउनुहोस् र बैठकबाटै सबै समस्याको हल गर्नुहोस्’ भने पनि ओलीले प्रचण्डप्रति गुनासो मात्र पोख्नुभएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा आजसम्म आइपुग्दासमेत आफ्नो गल्ति कमजोरीप्रति कुनै पश्चाताप नभएको र दोषजति प्रचण्डलाई दिन पछि नपरेको बताइन्छ ।
ओलीले ‘यत्रो लाञ्छना लगाइसकेपछि म किन बैठकमा जाने ? म राजीनामा दिन्छु र ?’ भन्दै पुनः कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गतिलै काउण्टर दिने संकेत गर्नुभएको बुझिएको छ ।
नेपालले वामदेव गौतमले जसरी नै आफ्ना सबै कुरा कमिटीको बैठकमा राख्नुस्,छलफल गरौं,समस्याको समाधान त्यहिँ निस्कन्छ भनेपनि बैठकमा ती कुरा राख्नेसम्बन्धमा चुईंक्क पनि नबोलिएको स्रोतको दाबी छ । बरु,उल्टै प्रधानमन्त्री तथा नेकपा अध्यक्ष ओलीले ‘यत्रो लाञ्छना लगाइसकेपछि म किन बैठकमा जाने ? म राजीनामा दिन्छु र ?’ भन्दै पुनः कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डलाई गतिलै काउण्टर दिने संकेत गर्नुभएको बुझिएको छ ।
यता,वामदेव गौतमलाई बिहान प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्षको अफर गरेपनि ती सबै क्रमशः चुनाव र महाधिवेशनपछि मात्र हुने भनिएको थियो । त्यस्तो उधारो वचनले वामदेव कमरेड फेरि बिच्किन सक्लान् भन्ने शुभचिन्तकहरूको सुझावप्रति प्रधानमन्त्रीले आवश्यकताअनुसार ‘भोलि नै महाधिवेशन र चुनाव गर्ने’ बताउनु भएको थियो ।
आवधिक निर्वाचनको आफ्नै नियम र कानुन छ । जसअनुसार आगामी दुई वर्षपछि मात्र संसदीय चुनाव हुनेछ । त्यसैगरी पार्टी महाधिवेशनको पनि आफ्नै प्रक्रिया भएकाले यसपटक कम्तिमा अढाई वर्ष अगावै महाधिवेशन हुने कुनै छाँटकाँट देखिँदैन ।
आइतबार दिनभरि भेटेका सबैले प्रधानमन्त्री गुनासो,आक्रोश र रिसको रनाहामा बसेको देखेका थिए ।
सात बजे बोलाएर करबलले साढे आठ बजे भएको भेटमा प्राप्त अफरलाई गौतमले ठाडो शैलीमा इन्कार गरेपछि दिनभरि प्रधानमन्त्री ‘मुड अफ’ हुनुभएको अड्कल लगाइएको छ । आइतबार दिनभरि भेटेका सबैले प्रधानमन्त्री गुनासो,आक्रोश र रिसको रनाहामा बसेको देखेका थिए । मंसीर ३ गते बोलाइएको सचिवालय बैठकमा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति हुने सम्भावना अत्यन्त कम हुँदै गएको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ । स्रोतका अनुसार परिस्थिति प्रतिकूल बन्दै गएकाले ‘प्रधानमन्त्री लगभग के गर्ने,के नगर्ने’ भन्ने मुडमा रहनुभएको बताइएको छ ।
अब समस्या के छ भने सबै बसेर ३ गतेलाई बैठक तोकिएको हो जसमा प्रधानमन्त्री जान अब इच्छुक हुनुहुन्न । यस्तो अवस्थामा त्यो बैठकको भविष्य के होला ? कुरा त फेरि दुई अध्यक्षवीच सहमतिको जो भनिएको छ !